Artista sy filatsahana solombavambahoaka Aleo miomana, hoy i Tence Mena
Anisan’ireo mpanakanto malaza nandray anjara mavitrika tamin’ny fampandaniana ny kandida ho filoham-pirenena farany teo, Marc Ravalomanana, i Mananjara Hortensia na Tence Mena.
Nalaza hirotsaka solombavambahoaka tamin’ity ihany koa ny tenany ary nilaza fa saika hanao izany tokoa. Rehefa nandinika anefa izy dia resy lahatra fa aleo amin’ny 5 taona manaraka satria fanamby na « engagement » amin’ny vahoaka, hoy izy, no atao ka aleo miomana. Mikasika ny mozika kosa dia taorian’ny “Tsisy Adversera ” dia hira milamina manaraka miainga any indray ny « Fahavalom-pitiavana ny fitsarana ». Mahita ity mpanakanto ity fa misy fivoarana be ny tontolon’ny mozika eto Madagasikara na resaka feo na rakitsary. Ho lasa lavitra isika, hoy izy, raha tsara tohana.